Jubbaland oo ka codsatay Xasan Sheekh in gacantooda kusoo celiyo Gedo | Wardoon
Home Somali News Jubbaland oo ka codsatay Xasan Sheekh in gacantooda kusoo celiyo Gedo
Jubbaland oo ka codsatay Xasan Sheekh in gacantooda kusoo celiyo Gedo
Maaamulka Jubaland ayaa waxay sheegeen in Madaxwaynaha cusub ee dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay ka rajeynayaan in uu gacanta Jubbaland dib ugu soo celiyo maamulka Gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya.
Wasiirka warfaafinta dowlad Goboleedka Jubaland Suleymaan Maxamed Maxamuud oo Idaacadda BBC-da u waramay ayaa sheegay in Madaxwayne Xasan Sheekh Maxamuud ay ka rajeynayaan in uu xal u helo arrinta Gobolka Gedo.
Dowladda Madaxweynihii hore ee dowladda Federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo maamulka Jubbaland ayaa saddexdii sano ee u dambeysay waxay isku hayeen maamulka gobolka Gedo.
Dowladdii Maxamed Farmaajo ayaa Gobolka Gedo ku daabushay Ciidamo farabadan oo ka tirsan dowladda Federaalka Soomaaliya, kuwaasi oo la dejiyay degmooyin ka tirsan Gobolka, sidoo kalena waxaa ay dowladdii Farmaajo Jubbaland kala wareegtay Gobolkaas, waxaana arrintaas ay sababtay dib u dhaca weyn ee ku yimid doorashadii dalka, wallow markii dambe Jubbaland ku guuleystay Xildhibaanadii Ceelwaaq.
Previous articleDAAWO:-Rooble oo Xasan Sheikh kula dardaarmayaa inuu dalka ka ilaaliyo Milkiile
Next articleDAAWO:-Liverpool Oo Guul Kala Soo Laabatay Southampton +SAWIRRO
Uhuru Kenyatta “Cidna kama aqbaleyno in ay sheegato lahaanshiyaha qeyb ka...
Midowga Yurub oo u hanjabay Turkiga